प्रज्ञामा पुस्तक मेला | Online Sahitya
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित पुस्तक मेलामा ३५ भन्दा बढी प्रकाशकका पुस्तक राखिएका छन् ।
१० दिनका लागि गरिएको मेलाको पहिलो दिन किन्नभन्दा पनि कस्ता पुस्तक राखिएका रहेछन् भनेर बुझ्न आउनेहरू बढी थिए । कुमारले चाहिँ हेर्दै गर्दा मन छुने दुइटा किताब किने । 'कुराकानी : मृतात्मासितको र अरूसितको पनि' एक कप चियाको मूल्यमा किने । १५ रुपैयाँ पर्ने त्यो पुस्तक किन्नुका पछाडि नामै काफी रहेको उनले बताए । 'अद्भुत,' उनले भने, 'यस्तै अनौठो पुस्तक पढ्न मन लाग्छ मलाई ।'
उनीसँगै पुस्तक मेलामा भेटिएका रंगकर्मी घिमिरे युवराजले चाहिँ अर्को दिन पुस्तक किन्न आउने सोच बनाएको बताए । उनीजस्तै अर्की पात्र थिइन्, बानेश्वरकी कृतिका महर्जन । कमलादीको बाटो हुँदै आएकी उनले ब्यानर देखेपछि पुस्तक मेलामा पसेकी थिइन् । उनले सबै पुस्तक स्टल घुमेपछि दुई तीनवटा मन छुने किताब पाएको र अर्को दिन किन्न आउने योजना रहेको सुनाइन् । 'केही पुराना किताब हेरिराखेकी छु,' उनले भनिन्, 'भोलि पैसा लिएर आउँछु ।'
पुस्तक मेलामा महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, साहित्य, कानुन, राजनीतिक, ज्योतिषशास्त्र, गृह विज्ञान, कृषि व्यवसाय लगायत विभिन्न विषय समेटिएका पुस्तकका स्टल छन् । प्रदर्शनी अवधिभर २० देखि ६० प्रतिशतसम्मको छुटको व्यवस्था रहेको आयोजकले बताएको छ ।
मेलाले पाठक, प्रकाशक र लेखकबीच संवादको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले बताए ।
मन्त्री बस्नेतले पुस्तक व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा व्यापक बनाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको दाबी गरे ।
मेलामा साहित्यसँग सम्बन्धित छलफल, विचार विमर्श लगायतका गतिविधिसमेत हुने आयोजकले जनाएको छ । शुक्रबारचाहिँ 'वर्तमान राजनीति र द्वन्द्व' बारे छलफलमा सञ्चारकर्मी रघु मैनालीको मोडरेसनमा नीलाम्बर आचार्य, जगदीश शमशेर, प्रा. लोकराज बराल, डा. विष्णु उप्रेती लगायत प्रस्तुत हुनेछन् । 'पत्रकारिता र प्रकाशन' बारे छलफलमा चाहिँ सञ्चारकर्मी घमराज लुइँटेलले प्रा. लालदेउसा राई, डा. प्रत्युष वन्त, रघु मैनाली र टंक उप्रेती प्रस्तुत हुने छन् ।
(साभारः कान्तिपुर दैनिक, शब्द तथा तस्वीर)